သောသီခို: တနင်္သာရီမြို့နယ် ကေအဲန်ယူဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များ ပိုမိုလှုပ်ရှားလာ
တနင်္သာရီမြို့နယ် ကေအဲန်ယူဒေသအတွင်း အစိုးရတပ်များ ပိုမိုလှုပ်ရှားလာ
ဇူလိုင် ၁၄ရက်၊ ၂၀၁၄ခုနှစ်။ ကေအိုင်စီ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီမြို့နယ်ရှိ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(ကေအဲန်ယူ) ထိန်းချုပ်ဒေသများတွင် ယခုလဆန်း ပိုင်းမှစ၍ အစိုးရစစ်တပ်များက လုံခြုံရေးစစ်သားများချထားခြင်း၊ တပ်စခန်းများ ပြင်ဆင်မွမ်းမံခြင်း၊ စခန်းတစ်ခုနှင့်တစ်ခု သွား လာနိုင်ရန် ကားလမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်း စသည့်လှုပ်ရှားမှုများ ပိုမိုလုပ်ဆောင်လာကြောင်း ဒေသခံလူထု၏ ပြောပြချက်များအ ရ သိရသည်။
တနင်္သာရီမြို့နယ်၊ ကော်ဆဲဒေသရှိ လမ်းဆုံလမ်းခွများတွင် ယင်းသို့ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း အမည်မဖော်လိုသူ မိုးတောင်ရွာ သားတစ်ဦးက “အခု စစ်တပ်လှုပ်ရှားမှုတွေက အရင် အပစ်အခတ် မရပ်စဲခင်အတိုင်းပါပဲ။ လမ်းဖောက်၊ စခန်းပြင်၊ တပ်အ ပြောင်းအလဲ၊ အဲဒါတွေကို အဆက်မပြတ်ပဲ လုပ်တယ်။ အရင်က အဲဒါတွေကို မတွေ့ရဘူး။ အခြေအနေက နည်းနည်း ပိုဆိုးလာ သလိုပဲ”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါ အစိုးရစစ်တပ် လှုပ်ရှားမှုများလာသည့်နေရာမှာ ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ရင်း(၁၁)နယ်မြေဖြစ်ပြီး ဇွန်လ ၁၃ရက်နေ့က ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်သား(၁)သေဆုံးကာ (၁)ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် အစိုး ရစစ်တပ်နှင့် ကေအဲန်ယူ တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ကြား ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ယခုကဲ့သို့ အစိုးရစစ်တပ်ဘက်မှ လှုပ်ရှားမှု ပိုမိုလုပ် ဆောင်လာသည်ကို မြင်တွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟု ယင်းရွာသားက ဆက်ပြောသည်။
အလားတူ ကော့သောင်းအခြေစိုက် အစိုးရစစ်တပ် စကခ(၁၃)လက်အောက်ခံ အင်အား (၃၀၀)ကျော်ရှိ ခမရ(၄၃၂)၊ ခမရ (၅၅၈)နှင့် ခမရ(၅၆၀) တပ်ရင်းများသည် တပ်အပြောင်းအလဲလုပ်ရန်ဟုဆိုကာ တနင်္သာရီမြို့နယ်သို့ ယနေ့ ထပ်မံ ရောက်ရှိ လာကြောင်းလည်း နယ်မြေခံ ကေအဲန်ယူသတင်းရပ်ကွက်အရ သိရသည်။
ထိုဒေသရှိ ကေအဲန်အယ်လ်အေ တပ်ရင်း(၂၀၃)မှ အရာရှိတစ်ဦးက “အစိုးရစစ်တပ်က တပ်အပြောင်းအလဲ လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလို လို။ တိုးချဲ့လာသလိုလို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မသိရဘူး။ အစိုးရစစ်တပ်တွေက တစ်ခုခုလုပ်ရင် ဒီအတိုင်းချည်းပဲ။ တစ်ခုမှ ရှင်းရှင်း လင်းလင်းမရှိဘူး”ဟု ပြောသည်။
အစိုးရစစ်တပ် လှုပ်ရှားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်တပ်မှ တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်း၍ မရသော်လည်း ၎င်းနယ်စပ်တွင် မြန်မာစစ်တပ်၏ လှုပ်ရှားမှုကို အနီးကပ် စောင့်ကြည့်နေသည့် ထိုင်းစစ်တပ်နှင့် နီးစပ်သူတစ်ဦးက “တပ်ရင်း ၃ရင်း၊ အင်အား ၃၀၀ကျော်နဲ့ စစ်ကားအများအပြား တက်လာတာမှန်ပါတယ်။ ဒီည တနင်္သာရီမြို့ အနီးအနားဝန်းကျင်မှာပဲ စခန်းချဖို့ များမယ်”ဟု ပြောသည်။
ကေအဲန်ယူ ဘိတ်-ထားဝယ်ခရိုင်၊ တပ်မဟာ(၄)တွင် အစိုးရ၏ စစ်ဆင်ကွပ်ကဲရေးဋ္ဌာနချုပ် စကခ(၂၀)၊ စကခ(၁၃)နှင့် စကခ (၈)တို့၏ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းပေါင်း ၅၀နီးပါး အခြေစိုက် လှုပ်ရှားလျှက်ရှိကြောင်း နယ်စပ်စစ်ရေးလေ့လာသူများက ပြော သည်။ ၎င်းအပြင် တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ဒေသခံလူထုကို ကေအဲန်ယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဆက်အသွယ် မပြုလုပ်ရန် အစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ ယခုလဆန်းပိုင်းက အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားသည်ဟုလည်း ဒေသခံ ပြည်သူလူထုက ပြောဆိုနေကြသည်။
Shilawah Wah said...
people say no war but what is that in KNU living will
crazy myanmar country
NO myanmar crazy.. .... KNU real crazy because KNU leader stopping isacrime. KNU leader don't care they people. Okey!!!
KNU leader don't love u .... they love only money . Do u know that ?